नविना लामाले यस्ता प्रश्न तेर्साएपछि शुशिला कार्की जिल्ल ! – www.agnijwala.com
नविना लामाले यस्ता प्रश्न तेर्साएपछि शुशिला कार्की जिल्ल !
७ साउन – पूर्वप्रधानन्यायधीश शुशिला कार्कीले डा. गोविन्द केसीको माग पुरा नभए देशमा आगो बाल्ने चेतावनी दिएसँगै सत्तारुढ दल नेकपाकाी सांस्द नविना लामाले त्यसको प्रतिवाद गरेकी छन् । युवा नेतृ, अनेरास्ववियुकी केन्द्रिय अध्यक्षसमेत रहेकी लामाले सामाजिक संजालमा कार्कीबिरुद्द खण्डन गर्दै जवाफ फर्काएकी हुन् ।
लामाले भनेकी छन्, ‘तत्कालीन समाननिय प्रधान न्यायाधीश श्री शुशिला कार्की ज्यु!!एउटा महिला देश को सर्बोच्च पदमा पुग्द खुशी र गर्व लाग्ने मान्छे म !!! देशको प्रधानमन्त्री , मन्त्री कति पढेको हुनु पर्छरु किन पड़न पाएनन ? कति वष जेल बसीयो भनेर कानुनको कुन धारामा लेखेको छ त्यो कुरा हजुरलाई थाहा नै होला । कहाँ कस्तो सम्बोधन गर्ने यो बिषयमा पनि हजुर जति जानकार हामी छैनौ देशभित्रका ब्यथिती शिक्षा स्वास्थ्यलागयतका मुद्दामा आमूल परिवर्तन अनिवार्य छ भनेर हामी आज भन्दा लामो बर्ष अघि देखि आन्दोलन गर्दै आएका छौ तपाई जतिको मानिसले जनतालाइ आगो बाल्न सडकमा आउनुस भन्ने कुरा कदापी उचित हुनसक्दैन । एउटा रास्ट्रभित्र गुणस्तरीय शिक्षा दिन्छु भन्ने कुरा पनि नराम्रो होइन बरु तेसको ब्यबस्थापन पक्ष उपयुक्त हुन्छ !!!’